"Somaliland, Puntland Iyo Jubaland Waxay Doonayaan Inay Ka Go'aan Somalia" - Warbixin Bannaanka Keentay Arrimo Xaasaasi Ah - Jigjigaonline
HomeSomalida“Somaliland, Puntland Iyo Jubaland Waxay Doonayaan Inay Ka Go’aan Somalia” – Warbixin Bannaanka Keentay Arrimo Xaasaasi Ah
Muqdisho (JigjigaOnline/ArabNews) – Somaliya waxay hoy u noqotay dagaal dhexmaraya dalal shisheeye, kuwaas oo loollankoodii iyo hirdankoodii usoo wareejiyey gudaha dalka, iyagoo ku tartamaya sidii ay ugu kala dheerayn lahaayeen saamaynta ay ku leeyihiin Soomaalida oo ay u arkaan inay muhiim u yihiin danahooda geeska.
Sida ay qortay warbaahinta The Arab News, dalalka khilaafku ka dhexeeyo ee Khaliijka ee Sucuudiga iyo Qatar, ayaa waxay ku biireen ciyaaryahannada dibedda uga imanaya Afrika, waxaana ay duullaankooda istaraatiijadeed bilaabeen sannadkii 2017 markaas oo gobolka ay ka bilaabeen xafiiltan cusub oo sii xoogaystay markii ay dalalka Carabtu go’doomiyeen Qatar.
“Sucuudi Arabia iyo Imaaraadka Carabtu waxay u arkaan Geeska Afrika meel istaraatiiji ah oo ay ka taageeri karayaan hawl-galladooda iyo ajandeyaashooda Yemen. Taas beddelkeeda, inkasta oo joogitaanka Qatar aanay ku jirin mid milateri, haddana Doaha ayaa ku leh awood qarsoon oo iskugu jira maalgashiyo iyo dhaqdhaqaayo ganacsi oo ay rajaynayso inay ku kobciso saamaynteeda tartanka dhaqaale iyo siyaasadeed.” Ayaa lagu yidhi warbixin ay qortay warbaahinta Arab News.
Warbixintan oo ay soo koobtay warbaahinta Jigjiga Online, Af-soomaalina usoo beddeshay ayaa waxa kale oo ay xustay in Quwadaha colka ah ee Bariga Dhexe si caddaan ah ay mar horeba iskugu muujiyeen Geeska Afrika, gaar ahaan Somaliya iyo Sudan, taas oo sii xoogaysatay markii Sucuudiga iyo Qatarr ay si cad halkaas ugu guureen.
“Halka ay Qatar oo xulafo dhow la ah Turkey ay taageerayaan Dawladda dhexe ee Muqdisho, kuwa kasoo horjeeda ee Sucuudiga iyo Imaaraadku waxay badhi-taaarayaan dawlad-goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo sidoo kale Jubaland, kuwaas oo dhamaantood raadinaya inay ka madax-bannaanaadaan Somaliya.”Ayey tidhi warbixintu, waxaanay intaas ku dartay: “Dawlad qas buuxa ku jirta, codadka gooni-isu-taagguna ay sii dheeraadeen oo ay gobollo dhawr ah oo dalka ah si cad uga soo yeedhayaan, waxay taasi cawaaqib sii xumaanaya ku yeelanaysaa dalka.”
Warbixintan lagu daabacay Arab News waxa kale oo ay sheegtay in dalalka Khaliijku ay Somaliya ku yeesheen galaan-gal badan, ayna gacanta ku dhigeen ilo dhaqaale iyagoo maalgelin ku sameeyey meelo dhawr ah. Waxay tusaale usoo qaateen Somaliland iyo Puntland oo Imaaraadku maalgelinno ku sameeyey, gaar ahaan shirkadda DP World oo dekedaha Berbera iyo Boosaaso gacanta ku haya.
“Tusaale ahaan, Imaaraadku waxa uu ka mid ahaa maalgeliyeyaasha ugu waaweyn ee Somaliland iyo Puntland. Shirkadda Imaaraadka ee DP World oo ka timid Dubai ayaa waxay $400 milyan ku maalgelisay dekedda Berbera, waxaanay ballan-qaadday inay ballaadhinayso garoonka diyaaradaha Berbera. Labadan hantiyood waxa maamulaya Imaaraadka iyagoo Somaliland na kaga beddelanaya mashaariic horumarineed, kana dhisaya saldhig milateri, kaas oo sii xoojin doona danaheeda Somaliland.”Ayey warbixintu tidhi.
Waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in Imaaraadku uu aad ugu dhowaa dawladda Muqdisho illaa sannadkii 2017, laakiin dawladda Federaalku ay diidday inay caddayso inay taageerayso UAE markii uu dhacay qalalaasihii Gacantu, taasina ay keentay in Imaaraadku dib iskugu noqdo oo ay kaalmadii horumarineed ka jaraan dawladda.
Warbixintu waxay ku eedaysay Sucuudiga iyo Imaaraadka inay si xooggan u taageerayaan dawlad-goboleedyada doonaya inay ka goáan Somaliya, maadaama ay yihiin “gobollada Somaliya ee Saliiddu ku duugan tahay.
“Imaaraadku waxa kale oo ay si xooggan u joogaan Puntland oo ka mid ah dhul kale oo doonaya inay gooni u go’aan. Imaaraadku, waxay halkanna ka sameeyeen sidii Somaliland oo kale, waxaanay masuuliyiinta gudaha la galeen heshiis ay ku maamulayaan dekedda Puntland ee Bosaso, halkaas oo DP World ay isha ku hayso inay ku maalgeliso lacag ka badan $300 milyan, waxaanay liisan u haysataa inay muddo 30 sannadood ah maamulato. Masuuliyiinta guduhu waxa kale oo ay Imaaraadka weydiisteen inay ka taageeraan xoojinta ciidamada booliska badda oo masuul ka ah la dagaallanka argagixisada iyo budhcad-badeedda.” ayay mar kale warbixintu tidhi.
Dhinacaa kale, warbixintu waxay sheegtay in Qatar oo uu Turkigu wehelinayo, inay yihiin garabka ugu weyn ee Dawladda Federaalka, taas oo ay u ballan-qaadeen lacago caawimo ah oo ay kaga taageerayaan kaabeyaasha dhaqalaaha iyo mashaariic horumarinta bulshada ah.
“Markii ay Qatar dhawaan shaacisay inay dawladda Faderaalka ah la gashay heshiis ay Hobyo kaga dhisayso deked, ayna gacanta ku hayn doonto Dawladdu, Sucuudiga ayaa kaga jawaabay inuu aqoonsaday baasaboorka Somaliland, taasina waxay dabka kusii shidday dalka diciifka ah ee hore u burburay. Maadaama ay dekeddu ku dhow dahay marinka Bab-el-Mandeb oo ah mid ka mid ah marinnada badda ee ugu muhiimsan ee gobolka, kaliya ka gudbaya Yemen, waxay dad badan layaab ku noqotay in Dawladaha gacanku ay damacsan yihiin inay jilbaha isku dhigtaan dagaal ay ku galaan Somaliya.”ayey warbixintu mar kale tidhi.
Waxa kale oo warbixinta lagu daabacay Arab News ay sheegtay, in Imaaraadku uu si dhab ah u taageerayo Somaliland iyo Puntland oo doonaya inay gooni uga goáan Somaliya, sidoo kalena ay taabacsan yihiin gooni-u-goosatada Koonfurta Yemen, taasina ay ka dhigan tahay, in Imaaraadku doonayo inuu ku abuuro dawlado yaryar oo illaa galbeedka Xeebta Afrika ah oo isagu uu saamayn weyn ku leeyahay.
Itoobiya Oo Faahfaahin Ka Bixisay Heshiis Ay La Gashay Somaliland